यी खानेकुराहरु भुलेर पनि खाली पेटमा नखानुहोस् , विष बराबर हुन्छ ! - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it क्यान्सरबाट बच्न माछाको बोसो ! एकचाेटी पढाैँ
Up Next दुधमा बेसार मिसाएर खानुका अचुक फाइदा थाहापाई राख्नुहोस !
महाभारतमा कसरी हनुमानजीले तोड्नुभएको थियो भीमको घमण्ड ? थाहा पाउनुहोस्
व्यक्तिले तागतको नशामा संस्कार र विनम्रता छोड्नुहुँदैन । तागतको घमण्डमा यी कुरालाई छोड्ने मानिसको जीवनमा अनेक समस्या आउँछन् । पाण्डवहरूको…
One thought on “यी खानेकुराहरु भुलेर पनि खाली पेटमा नखानुहोस् , विष बराबर हुन्छ !”
jeevan bachaune upayaharu yo ho.